Micnaha taatikada buufin | Tattoo
Nat Cerezo | | Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos'
ka Tattoolada buufin iyo buufinnada hawo kulul waa hab aad u xiiso badan oo lagu qabto maqaarkeenna tattoo aan waxba galabsan oo faraxsan. Waa nooc tattoos ah oo aan jecel nahay ama aanan jeclayn, marwalba waxay dib noogu celiyaan carruurnimadeenii.
Oo taasi waa, Yaan u maleynin sida ilmo yar oo qabsanaya labo buufin oo awood u leh inuu duulo? Sawir qurux badan iyo sidoo kale jilicsan oo, sanadihii la soo dhaafay, wuxuu ku noqonayaa xusuus aan badnayn maskaxdeenna. Marka xigta waxaan ka hadli doonaa macnaha tattooskan waxaanan ku siin doonaa fikrado badan oo kugu dhiirrigeliya.
1 Micnaha taatikada buufin
2 Fikradaha tattoo buufin
2.1 Gabadha Banksy iyo Balloon
2.2 Tattoolada biinlaha
2.3 Buufinnada iyo buugaagta tattoo
2.4 Gabar kor u qaaday buufinnada
2.5 Buufin wadnaha u eg
2.6 Tattoo adduunka
2.7 Tattoo sawirka carruurta oo leh buufinno
2.8 Buufinno waa shimbiro
2.9 Tartanka buufin ee lugta
2.10 Buufin Origami
3 Sawirrada Tattoos Balloon
Micnaha taatikada buufin
Tattoolada buufinku maahan wax cusub, waana taas Waxay qayb ka ahaayeen adduunka tattoo-ga muddo dheer. In kasta oo ay tahay naqshad u janjeedha dhinaca dumarka, haddana maahan wax adag, maxaa yeelay waxaan sidoo kale ka heli doonnaa nooc ka mid ah astaamahan oo si dhammaystiran loogu tirin karo jidhka nin.
Laakiin, Maxay astaan ​​u yihiin buufin iyo / ama kuleylka buufin ee kulul? In kasta oo aysan jirin macno qoto dheer, haddana waxaan la xiriiri karnaa dhinacyo kala duwan shayga laftiisa. Waana tan iyo markii ay caan noqdeen, sawirada balooniyada ayaa lala xiriiriyay xorriyadda dadka iyo dhiirrigelinta. Sidii aan uga wada hadalnay qormooyinka kale, waxaan sidoo kale helnaa qof aan waxba galabsan iyo sidoo kale farxad iyo dabaaldeg, mana ahan wax aan jirin oo ay yihiin halyeeyada buugaagta aan la tirin karin iyo sheekooyinka carruurta ee hal-abuurka iyo daahfurka ay ku guuleystaan, sida kuwa aan la aqbali karin Google, ka Badal, ama Dunida dhexdeeda 80 Maalmood reer Verne.
Buufinnada, marka lagu daro, iyo sidaan kor ku soo sheegnayba, waxay dib noogu celinayaan carruurnimadeenii si ay u iftiimiyaan tiro la’aan xafladaha carruurta ee midabkooda iyo duulaankooda xiisaha leh. Taasi waa sababta mararka qaarkood loogu adeegsado tusaale ahaan carruurnimada lumay, sida Banksy muralka gabadha iyo buufinka.
Fikradaha tattoo buufin
Sida aad ku arki karto qaybtaan iyo sawirka hoose, waxaad ka heli kartaa runtii nashqado xiiso leh haddii aan ku darno waxyaabo kale sida Rose, skull ama shay kasta oo kale oo "ku xirmi kara" buufinda aan dooneyno inaan ku sawirno. Sidan oo kale waxaan ku heli doonnaa tattoo dhammaystiran, xiiso leh iyo shakhsiyeed. Eeg tatoolooyinka buufin ee soo socda si aad u hesho fikradaha sawirkaaga xiga
Gabadha Banksy iyo Balloon
Waxaa lagu sawiray London 2002, Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan ee farshaxanka loo yaqaan ee Banksy. Dhawaan waxaa loo adeegsaday naqdinta dhibaatada qaxootiga Suuriya 2014. Sannadkii 2018, nuqul qaabaysan ayaa lagu iibiyay Sotheby's hal milyan oo ginni ... kadibna keligiis ayaa lagu baabi'iyay iyadoo la adeegsanayo nidaam ay iyadu abuurtay. .
Sida tattoo waxay umuuqataa mid cajiib ah, in kastoo waxaad u baahan doontaa inay ahaato cabir gaar ah oo aad dhigto meel aad u ballaadhan si ay ugu muuqato mid wanaagsan.
Waa wax lala yaabo imisa tattoos ayaa adeegsanaya sawirkan, leh barroos oo ku xidhan farabadan buufin. Waxay u taagan tahay dheelitirka, barroosinka aan quusin karin iyo qaar ka mid ah buufinnada oo lumi kara cirka sare sababtoo ah culeyska barroosinka. Waa tattoo wanaagsan dadka riyada leh ee doonaya inay xoogga saaraan inay cagaha ku hayaan dhulka.
Wuu ku shaqeeyaa sifiican midabbo buulal leh oo midab leh iyo hadaadan rabin naqshad aad u weyn, sidoo kale Waxay u muuqdaan kuwo yaryar oo waaweyn iyo khadad jilicsan.
Buufinnada iyo buugaagta tattoo
Buugaagtu waa sida buufinnada oo kale, waxay naga dhigayaan inaan dul sabbaynno dhinac walba: kor, horay iyo xitaa gadaal. Waa laba cunsur oo aan kala maarmi karin sababtuna tahay macnaha macnawiyan ee ay wadaagaan. Tani waa tattoo u muuqda mid si gaar ah ugufiican taabashada retro, ama adduunka ama sawirka, oo raaci kara qaabka dhaqameed, sida kan sawirka: khadadka qaro weyn iyo midabada dhalaalaya.
Gabar kor u qaaday buufinnada
Kahor intaanan faallo ka bixin taas buufinnada waxay matalayaan carruurnimadii iyo waqtiyadii la soo dhaafay, taas oo aan nafteena ugu sii daayeyno in badan oo male ah. Xaaladdan oo kale, tattoo wuxuu doonayaa inuu noqdo xusuusin waqtiyadaas, oo ka duwan naqshadaha kale ee badan, wuxuu doortay qaab miyir leh oo jilicsan oo madow iyo caddaan ah. Qaabka, oo leh dhibic jilicsan, iyo qaababka joomatari ayaa sidoo kale tilmaamaya labadooda cents nostalgia ee sawirkani u gudbiyo.
Buufin wadnaha u eg
Haddii aad raadineyso tattoos biibiile oo asal ah, dooro inaad geliso walxo lama filaan ah jirka buufinka. Tusaale wanaagsan ayaa ah qaybtan, ee qalbi lagu beddelay. Ingiriisi ahaan waa erey aad u fiican erey, maxaa yeelay waxaa la sheegaa in qalbigaagu "sabeeyo" markaad faraxsan tahay ama faraxsan tahay. Haddii ay wax jiraan, waa naqshad aad u awood badan oo shaqsiyeed.
Hadana hadaan ka hadalno buufinnada, ma iska indho tiri karno adduunka aan ku nool nahay, Dhulka. Qaabkeeda awgeed, waa ikhtiyaar fantastik ah in lagu sawiro qaabka balooniga cunuga, tusaale ahaan, ama lagu xiro kursi, ama guri ... Tattoo this iyo dusha sare waxay u egtahay meel kasta.
Tattoo sawirka carruurta oo leh buufinno
Sawirada carruurta (ama ay sameeyeen carruurtu) sidoo kale waa il wanaagsan oo dhiirrigelin leh si aan qaybteenna uga dhigno mid shaqsiyadeed intii suurtagal ah. Haddii aad rabto inaad tixraacdo carruurnimadaadii, dooro sawir aad sameysay ama kartoon laga soo bilaabo waqtigaas (ama xitaa toy ama xayawaan cufan oo aad ku qadarin jirtay).
Buufinno waa shimbiro
Waxaa macquul ah mid ka mid ah sawirka ugu quruxda badan ee aad ku aragto buufin runti ma laha buufinno, maadaama lagu beddelay shimbiro. Micnaha isku mid ayuu noqonayaa, in kasta oo fikirka fudud lagu badalay adoo iska dhigaya in lagaa qaado meesha ay dabeecadu doorbido ... Sababtoo ah dabeecaddiisa isdaba-joogga ah, waxay u egtahay mid madow iyo caddaan ah, oo leh khadad fudud oo cad.
Tartanka buufin ee lugta
Naqshad kale oo u muuqata mid weyn, gaar ahaan haddii aad nafsaddaada u hurto adduunka buufinnada, waa qayb lug ah oo leh qaab macquul ah iyo midab buuxa. Buufinnada, oo leh midabyo kala duwan oo noocaas ah, waxay si gaar ah u taabanayaan taatuuga, oo noqon kara wax la yaab leh haddii aad fursad u hesho inaad ka tarjunto qorrax ka soo baxa ama qorrax dhaca.
Ugu dambeyntiina, naqshad kale oo aad u xiiso badan ayaa ah mida ka faa'iideysata sameynta buufin xaflad laakiin waxay siinaysaa taabasho ka duwan. Tusaale ahaan, Qeybtaan buufinku wuxuu leeyahay doon origami ah oo la sawiray, dunta qabsatayna waxay ka socotaa dhinaca oo dhan illaa ay ku dhammaato barroosinka.
Tattoolada buufin waa kuwo caan ah, in kasta oo aad leedahay siyaabo aad ugu dul wareejin karto xiiso aad u xiiso badan. Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinay inaad hesho. Noo sheeg, ma leedahay wax sawir ah oo sidan oo kale ah? Muxuu astaan ​​u yahay? Xusuusnow inaad noosheegi karto waxkasta oo aad rabto, kaliya waa inaad nooga tagtaa faallooyinka!
Sawirrada Tattoos Balloon
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos' » Uruurinta fallaadhaha fanka, si loogu asteeyo dhiirrigelinta iyo xorriyadda
Maskaxda iyo sawirka wadnaha, iskudhaf aad u xiiso badan!